Cabdulahi Ciise – Page 2 – Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
Author: Cabdulahi Ciise
November 29, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wasiiru Dowlaha Wasaaradda qorshaynta Mudane Ahmed (Biid) Ibraahim Cawaale iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kulan la qaatay Maamulka Mombasa.
Wafdi kasocda Dawladda Puntland gaar ahaan Wasaaradda Qorshaynta iyo Madaxtooyada ayaa aqoon kororsi utegay hay’adaha kala duwan ee Dawladda Kenya.
November 25, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wafdi kasocda Dawladda Puntland gaar ahaan Wasaaradda Qorshaynta iyo Madaxtooyada ayaa aqoon kororsi utegay hay’adaha kala duwan ee Dawladda Kenya.
Wafdi kasocda Dawladda Puntland gaar ahaan Wasaaradda Qorshaynta iyo Madaxtooyada ayaa aqoon kororsi utegay hay’adaha kala duwan ee Dawladda Kenya. Wafdiga ayaa aqoon kororsigaas kahelay Xafiiska Madaxtooyada Dawladda Kenya, Wasaaradda Qorshaynta, Xarunta Iskaashiga Gobolada, Jaamacadda Nairobi iyo goobo kale oo muhiim ah. Ujeedada safarka ayaa ah in kor loo qaado awooda wax qabad hay’adaha Dawladda […]
November 21, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wafdi ka socda Wasaradaha Qorshaynta iyo Xafiiska Madaxweynaha Dowladda Puntland ayaa u jooga wadanka Kenya Aqoon Kororsi ku aadan Hormarinta Siyaasadaha Dowladda
Wafdi ka socday Wasaarada Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa soo gunaanaday aqoon karorsi uga socday magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
November 19, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wafdi ka socday Wasaarada Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa soo gunaanaday aqoon karorsi uga socday magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Wafdi ka socday Wasaarada Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa soo gunaanaday aqoon karorsi uga socday magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Wafdigan ayaa ka qaybgalay Asbuuca Qiimaynta iyo Dabagalka ee Africa kaas oo lugu soo bandhigay qaababka kala duwan ee looga shaqeeyo wadamada Afrika ku yaal iyo casharada wadamadaas ay ka baran karaan dhiigooda
Wafdi uu hogaminayo Wasiirkuxigeenka Wasaardda Qorshanyta iyo Xiriirka Caalamiga ah Mudane Siciid Faarax oo ay waheliyaan madax qayboodyo kala dawan ayaa maanta uga qayb galay Asbuuca Qiimaynta iyo Dabagalka ee Wadanka Kenya.
November 14, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wafdi uu hogaminayo Wasiirkuxigeenka Wasaardda Qorshanyta iyo Xiriirka Caalamiga ah Mudane Siciid Faarax oo ay waheliyaan madax qayboodyo kala dawan ayaa maanta uga qayb galay Asbuuca Qiimaynta iyo Dabagalka ee Wadanka Kenya.
Wafdi uu hogaminayo Wasiirkuxigeenka Wasaardda Qorshanyta iyo Xiriirka Caalamiga ah Mudane Siciid Faarax oo ay waheliyaan Agaasimaha Guud Xuseen Cabdi, Agaasiamha Qiimanta iyo Dabagalka, Khabiirka Qiimanta iyo Dabagalka ee mashruuca CIP, iyo madax qayboodyo kala dawan ayaa maanta uga qayb galay Asbuuca Qiimaynta iyo Dabagalka ee Wadanka Kenya. Asbuuca Qiimaynta iyo Dabagalka ayaa la qabtaa […]
November 12, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Madaxwayne kuxigeenka Dawladda Puntland MD. Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camay oo uu weheliyaan madax qayboodyo kala dawan ayaa soo xiray tababarka sahanka caafimaadka iyo arrimaha bulshada oo dhawan laga qaban doono guud ahaan Puntland.
Wasaaradda Qorshaynta iyo Xirrirka Caalamiga ka bilowday Qorshaynta iyo Dib u eegista Mashaariicda Hay’adda UNICEF ka wado Puntland ee qaybta Biyaha, Fayo-Dhawrka iyo Nadaafada
November 5, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wasaaradda Qorshaynta iyo Xirrirka Caalamiga ka bilowday Qorshaynta iyo Dib u eegista Mashaariicda Hay’adda UNICEF ka wado Puntland ee qaybta Biyaha, Fayo-Dhawrka iyo Nadaafada
. Wasaaradda Qorshaynta iyo Xirrirka Caalamiga ah waxaa saaka oo Isniin ah 5ta bisha Nufeeber ka bilowday Qorshaynta iyo Dib u eegista Mashaariicda Hay’adda UNICEF ka wado Puntland ee qaybta Biyaha, Fayo-Dhawrka iyo Nadaafada. shirkan oo socon doono muddo labo maalmood ah ayaa waxaa looga hadli doonaa wixii ka qabsoomay qorshaha sanadda 2018 ka oo […]
October 22, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland Mudane Xuseen Cabdi Jaamaca ayaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraatka uga qaybgalay shirka iskaashiga xogta Caalamka.
October 22, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga aha iyo Hay’adda UNHCR ayaa kulan ku qaatay xog iswaydaarsi ah ku qaatay Xafiiska Wasaaradda
October 10, 2018 February 13, 2019 Cabdulahi CiiseComments Off on Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa bilowday tababarka Sahanka Caafimaadka iyo Macluumaadka Bulshada.